'UKUHLASELWA KWITITAN' KUYAPHELA KODWA KUYA KUBA NINI 'KUBE YINTO ENYE'? - ANIME
Kuphela Kwendlela Ilori
Thelma Kunye No-Louise
Ukuhlaselwa kweTitan kuyaphela kodwa kuya kuba nini na?
Uthotho lwe-anime oludumileyo Uhlaselo kutitan iza kuphela kungekudala (kunye nemanga mhlawumbi nayo iyaphela) emva kwemiqulu engama-28 kunye neziqendu ezingama-59. Okwangoku, Ipisi enye uhleli kamnandi ngemiqulu engama-93 kunye neziqendu ezingama-890 kunye nokubala, kungekho siphelo siseza kubonakala.
Kulabo abangaqondi, Ipisi enye okokuqala kwaqala ngo-1997/1999 (imanga kunye ne-anime ngokwahlukeneyo) kwaye wabalisa ibali le-hat-hat enxibe i-Monkey D. IPirates. Uyityile le nto yomlingo ibizwa ngokuba sisiqhamo sikaMtyholi, enika abantu amandla angaqhelekanga. U-Luffy kukuba wenziwe ngerabha kwaye wolule kakhulu (kodwa kukwathetha ukuba akanakudada, nto leyo enokuba yingxaki kwipirate).
Udityaniswe neqela lakhe elitshisayo elenziwe nguRoronoa Zoro, indoda enekrele elibi; UNami, umatiloshe kunye nesela; Usopp, sniper kunye nexoki; kunye noSanji, umpheki othanda abafazi. Isigaba 2 sabasebenzi sibona uTony Tony Chopper, ugqirha kunye ne-anthropomorphized reindeer; UNico Robin, umembi wezinto zakudala kunye nombulali wangaphambili; UFranky, umkhweli wenqanawa wecyborg; Brook, imvumi emathambo kunye nomphathi wamakrele; Kwaye uJinbe, umlobi weentlanzi uzibandakanya nabo.
Kwangoko kulo nyaka umyili u-Eiichiro Oda wayitsho loo nto Ipisi enye iza Kubayi iphela kungekudala kodwa ukuba iya kuba ngaphezulu kwe-100 yevolumu iyonke, ergo sinendlela ende yeesile yokuhamba.
Kwaye xa u-Oda esithi i-OP izakuba 'ngaphezulu kwe-100 yevolumu' ungaqali ukukuqhekezela iimpahla zokulinda ikhandlela ukulila isiphelo. Ungaphantse ubone i-troll grin kumazwi akhe. Inxalenye enye iya kuqhubeka ixesha elithile.
-Greg (@ ochimusha108) NgoJanuwari 9, 2019
Andizukutsho njalo Ipisi enye yi-anime eyoyikekayo, kodwa okwangoku, ndiyazibuza ukuba ingaba ayinakuphela njani isiphelo, kodwa isiphelo esanelisayo.
Ukucaciselwa nje, kungabalwa mabali kunye neziqendu ezingekhoyo, Ugqirha Ngubani, ebihleli ngaphezulu kweminyaka engama-56 ineziqendu ezingama-851. IiSimpson ineziqendu ezingama-662 kuphela. Iziqendu ezingama-890… isreal.
Xa ndandikwishumi elivisayo, Iblitshi , Naruto , InuYasha , kunye Ipisi enye Ngaba izihloko ezine ezisebenza ixesha elide ezazirhuqe ixesha elide iibits ezilungileyo zazilibalekile. Kwezine, ndiyacinga InuYasha kwaye Naruto ndafumana iziphelo ezonelisayo; Iblitshi kwakungumlilo oshushu kangangokuba unanamhla undenza umsindo ukuba ndicinge ngawo, kodwa Ipisi enye isaqhubeka ngamandla.
Eyona nto yayenza mandundu kukuba i-anime yayikhupha impompo kakhulu ukuze yolule ii-arcs xa imanagaka yawa ngasemva kwe-anime. Uninzi lokugcwalisa, nokuba lolona lulungileyo, lunokumisa uthotho kumandla alo apheleleyo. Njenge ibhola yedragini fan, ngalo lonke ixesha ndithetha nabantu abatsha abaqhula malunga nokuba zizigigaba ezithathu zokuqinisa amandla, ndihlala ndibalathisa kwimanga kuba ngaphandle kwayo yonke into yokugcwalisa, libali elinamandla kwaye licacile. Kwakhona, ezinye iziqendu zokugcwalisa zilungile, kodwa xa zidala amaxesha onyaka onke, oko kumosha nje ingqibelelo yolwakhiwo.
Njengoko enye imeme yayibeka:
Xa isiza Uhlaselo kutitan , Ndonwabile ukuba iyaphela kuba sele ihambile ngeendlela ezingaqhelekanga, kodwa inokwanela ngokwaneleyo ukuba ingaphela kakuhle. Ijaji isaphumile ukuba Ipisi enye uya kubambelela kokufika, kodwa ndiza kukuxelela oku… akukho mntu unyaniseke njenge Ipisi enye fan.
Eseleyo Ipisi enye abalandeli, zeziphi iiarcs zakho ozithandayo kuthotho? Kwaye wonke umntu, ibiyintoni inqaku onikezele ngalo kuthotho?
(umfanekiso: Umsebenzi / iPony Canyon)
Ijenali Yebhayoloji Yovavanyo
Umboniso bhanyabhanya malunga nokutyeba kwentombazana
elona xesha libi kakhulu lobugqwirha
jem kunye nedoli yeholograms
sebastian stan uphawu hamill unyana
darth vader andifuni